Miozolomana Mpampianatra Ambony Iray Te-Hampifandray an’i Israely sy i Indonezia Amin’ny Alalan’ny Teny Hebreo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2018 5:42 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Ελληνικά, Español, Esperanto , 日本語, English
Ny fonombokin'ny rakibolana Hebreo-Indoneziana. nampindramin'i Sapri Sale, natambatra, nahazoana alalana.
Ny fiteny hebreo ve no mety ho randrana iraisana mampifandray an'i Israely sy i Indonezia — firenena iray ahitana miozolomana be indrindra eto ambonin'ny tany — hiara-dalana? Izany no eritreritry ny mpampianatra Islamika iray.
Niezaka ny hampisy fifankahazoana bebe kokoa amin'ny Indoneziana sy ny Israeliana amin'ny alalan'ny fampianarana ny teny hebreo ho an'ireo mpianatra miteny bahasa ny mpampianatra ambony miozolomana iray.
Tsy manana fifandraisana ara-diplaomatika i Indonezia sy i Israely. Ny marina, jeren'ny fampitam-baovao indoneziana amin'ny fomba miiba i Israely noho ny politikany manoloana an'i Palestina. Raha hizotra ho any Aostralia hanao fitsidihana ara-panjakana manan-tantara ny praiminisitra israeliana Benjamin Netanyahu tamin'ny taona 2017 dia voatery nidify [mg] ny faritr'habakabaka Indoneziana. Mety ho fanalahidy ahitana ny zavatra mety itovitovizana ve ny zavatra tsotra toy ny fiteny?
Niresaka tamin'i Sapri Sale tamin'izay nahatonga azy hianatra teny hebreo tamin'ny fotoana nianarana teny arabo ny Global Voices, izay nahatonga azy hieritreritra ny hampianatra teny hebreo tao Indonezia, ary ny tolona natrehiny tamin'ny fanoratana sy famoahana ny rakibolana indoneziana-hebreo voalohany.
Sapri Sale miaraka amin'ny mpianany ao Jakarta. Sary nomen'i Sapri Sale, nahazoana alalana.
Global Voices (GV): Fa ahoana ary nahoana ianao no lasa nianatra teny hebreo aloha?
Sapri Sale (SS): Tiako ho fantatr'izao tontolo izao fa tsy ny Indoneziana rehetra no mpitolona (miozolomana). Maro endrika ny firenenay. Tsy misy hafa amin'ny kolontsaina arabo ny kolontsaina hebreo ho ahy, fa raha misy (eto Indonezia) ao anatin'ny kolontsaina sy fiteny indoneziana eto an-toerana ny (teny) arabo, dia manan-jò mitovy hisy eto amin'ny firenena ihany koa ny (teny) hebreo.
Tamin'ny taona 1989 aho mpianatra literatiora arabo tao amin'ny oniversite Al Azhar tao Kairo. Liana dia liana tamin'ny zeôpolitika tao Afovoany Atsinanana aho; saingy, nahafantatra aho fa voaloko amin'ny fomba miiba i Israely ao Egypta. Efa nizotra folo taona eo ho eo ny dinan'ny fandriampahalemana teo amin'i Israely sy i Egypta tamin'izany fotoana izany. Fa efa mandranitra hetsi-po antisemita amin'ny mponina ankapobeny ny fampitam-baovao tamin'izany fotoana izany. Nolaviko ny hihazakazaka amin'ny fankahalàna ary nanapa-kevitra aho ny hahatakatra marina izany nitranga, mila mianatra teny hebreo aho hahafantatra izay rehetra momba an'i Israely tsy misy fitsaratsara-poana mialoha.
Mampihomehy ihany moa fa na dia misy aza ny fifandraisana ara-diplaomatika eo amin'i Egypta sy i Israely, dia tsy mora ny hahazoako boky momba ny fiteny hebreo. Hevero anie, tamin'ny vanim-potoana nialoha ny nampalaza ny aterineto no nitoerako tany; Tsy fantatro akory raha nisy foibe ara-kolontsaina Israeliana tany, ary nanahirana dia nanahirana ny nanontany ny masoivoho israeliana. Tsara vintana ihany aho nahita boky hebreo vitsivitsy ary nanomboka nampiana-tena.
Rehefa nianatra teny hebreo taona maromaro aho vao nahita foibe israeliana iray tao Kairo, ary nanomboka niditra kilasy tao aho tamin'ny taona 1993. Egyptiana iray antsoina hoe Amer no nampianatra ahy. Azo takarina tsara fa hafahafa (amin'ny hafa) ny fahatongavako tao, ary nampiahiahy ny vondrom-piarahamonina israeliana tao amin'ny foibe mihitsy aza: manana endrika Aziatika aho ary fanampin'izany dia mpianatra ao amin'ny Al Azhar. Miisa 600 ny Indoneziana mpianatra tao Kairo, ary izaho irery ihany no hany nampitombo fahalianana amin'ny fiteny sy kolontsaina hebreo.
Nifindra tany Libanona aho tamin'ny taona 1996 hanohy ny fianarako (asako). Indrisy fa tsy maintsy nitsahatra tamin'ny fianarana teny hebreo ihany koa aho tamin'izany noho ny antony ara-politika. Nahita asa vaovao tao amin'ny Iraka Maharitra tao New York aho tamin'ny taona 1999. Tany aho no afaka namelona indray ny fankamamiako hianatra teny hebreo, ary tany aho no nanomboka nandrafitra ny rakibolana Indoneziana-Hebreo tamin'ny taona 2006, rehefa nianatra teny hebreo nihoatra ny 20 taona.
GV: Lazao anay ny momba ilay rakibolana. Inona avy ireo fanamby natrehina rehefa hanonta printy ilay asa sarotra vitanao?
SS: Rakibolana 450 pejy amin'ny teny hebreo sy indoneziana samy maoderina izy io. Io no tondroina ho an'ny Indoneziana te-hianatra teny Hebreo sy ho an'ireo mpiteny hebreo te-hianatra teny Indoneziana. Io no valin'antsoko hampifandray an'i Indonezia sy i Israely, ara-pitenenana sy ara-kolontsaina.
Maro, araka izay azonao eritreretina, ny fanamby. Tontolo tsy misy ifandraisany ny fiteny Indoneziana sy ny fiteny Hebreo. Nikatso matetika aho tamin'ny fitadiavana ireo voambolana mifandray hevitra. Eo no miditra an-tsehatra ny fahaizako teny arabo, satria misy itovitovizana ny teny arabo sy ny teny hebreo. Ny teny arabo no lasa itodihako amin'ny fandikana ny teny hebreo ho teny indoneziana.
Tamin'ny taona 2016 no vita ny fanoratana, ny fitsipahana isan-karazany indray no tsy maintsy natrehiko. Tsy dia mazoto loatra amin'ny zavatra rehetra misy ifandraisany amin'i Israely ireo mpamoaka boky malaza, ka lazaina ho tsy dia ilaina loatra, tsy mety amidy eny an-tsena ary tsy mifanitsy amin'ny politika ny rakibolako. Indray andro aho no nahita mpamoaka boky iray mahaleotena tany Yogyakarta ananiky hanao ny asa, fa tsy maintsy izaho ihany no mamatsy vola hahavita printy ny boky. Saingy niatrika sakan-dalana hafa indray aho rehefa hisoratra anarana amin'ny ISBN. Amin'ny ankapobeny dia azo ao anatin'ny iray volana ny ISBN; Fa tsy maintsy niandry telo volana aho vao nahazo ISBN tamin'ny rakibolako.
GV: Mbola mitoetra ho lohahevitra saropady i Israely. Niaina toe-draharaha nanahirana amin'ny maha-miozolomana mampianatra teny hebreo sy amin'ny maha-mpanoratra anao ve ianao?
SS: Tsy raharahiako ny fanesoana sy ny fandrahonana. Noho ny safidiko sy ny asako, nanome anaram-bositra ahy hoe ‘Sapri ilay jiosy’ ry entanin'ny fitiavan-tena. Miodin-dalana ny fianakaviambeko rehefa hifanena amiko, midify ahy ireo niara-nianatra tamiko tany amin'i Al Azhar. Nampahatsiahy ahy tamin-kamoram-po ny vadiko, izay mijery hatrany ny drafitry ny rakibolana, indray andro fa fandanian'andro no ataoko. Saingy efa any amin'ny lalina indrindra aho: 25 taona nianarana sy nampiasana azy — tratra aoriana loatra raha izao vao mijanona.
Lazaina ho mpanao hosoka ihany koa aho; ary hosoka (tsy izy) ny asako. Miteny amin'ny mpanenjika amin'ny fomba tsotra aho fa ny asako araka ny fombam-pitenenana hebreo iray izay dia tsy mandeha, ‘amin'ny hery na fahefana, fa amin'ny fanahy.’
Niteny tamin'ny fianakaviako aho fa mety tsy hisy fiantraikany mihitsy ny zavatra ataoko, saingy zavatra nilaina hovitaina izany.
GV: Raha hanatrika ny fampianaranao teny hebreo izahay, inona no azonay antenaina?
SS: Tokony ho 70% amin'ny mpianatro ny kristiana ary 30% ny miozolomana. Maro amin'ny kristiana mpianatro — ary mpampianatra ambony ny ankamaroany — no te-hahatakatra bebe sy tsara kokoa ny baiboly. Manantena aho fa rahatrizay dia ho maro kokoa ny mpianatra avy amin'ny Pesantren (sekoly Koranika). Manana tombony kkoa ireo avy amin'ny Pesantrens satria efa hainy rahateo ny fomba famaky teny arabo, kaho mora kokoa ho azy ireo ny mianatra teny hebreo. Ny fampianarako moa dia tontosaina ao amin'ny Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) [Dinika Indoneziana momba ny Fivavahana sy ny Fandriampahalemana], ny fikambanana tokana hany nanaiky ny handray ahy. Maharitra iray ora sy sasany ny fotoam-pianarana tsirairay ahy. Efa nampivelatra fomba fianarana hoan'ireo Indoneziana mpiray tanindrazana amiko aho, ka ho afa-mamaky teny hebreo maoderina ry zareo rehefa nanatrika fianarana im-balo, ary afaka ny mampiana-tena ry zareo aorian'izany.
GV: manana tetikasa hoavy?
SS: Ny fanoratana boky indrindra indrindra. Efa andalana ny fitsipi-pitenenana hebreo maoderina ary efa ho azo atonta printy ihany koa. Efa mikasa ny hamoaka boky iray hafa, hebreo ifampiresahana ho an'ny mpiteny indoneziana ihany koa aho.
Azo vidiana amin'ny alalan'ny fanaovana komandy mivantana amin'ny mpanoratra ny rakibolana Hebreo-Indoneziana.